Progressive Voice Myanmar » မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ကျဆင်းမှုသည် ကမ္ဘာတွင် အဆိုးဆုံးဖြစ်နေသည် – Myanmar Internet Freedom Worst Decline in World
Home Resources Press Releases မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက်လ...
Press Release 317 Views
October 13th, 2020 • Author: Free Expression Myanmar •2minute read
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလွတ်လပ်ခွင့် အဆင့်များကျဆင်းလာခြင်းသည် ကမ္ဘာတွင် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ကြောင်း ယခုနှစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားသဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ယင်းအခြေအနေမှ တိုးတက်လာအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမည်ဟု ကတိကဝတ်ပြုကြရန် FEM မှ တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
“ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာက နိုင်ငံတွေအများအပြားမှာ လုပ်ထားတဲ့ တစ်နှစ်တာသုတေသနပေါ်မှာ အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီးတော့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် အဆင့်တွေခုန်ဆင်းသွားမှုမှာ ကမ္ဘာ့အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်” ဟု လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာ (FEM) ၏ ဒါရိုက်တာ ယဉ်ရတနာသိန်းမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှု၊ နှေးကွေးလှတဲ့ 2G ကွန်ယက်သာ ရရှိမှု၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွေ ပိတ်ဆို့လိုက်ခြင်း နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်ဘဲ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို တရားစွဲဆိုတာတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ရပ်ဝန်းအဖိနှိပ်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်” ဟု သူက ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းစနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လို့ ဒီလိုအင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ကျဆင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ နှစ်စဉ်တိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ပိုမိုဆိုးရွားလာနေတာဖြစ်ပြီး၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ အပါအဝင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကျဆင်းမှုက အရမ်းလျင်မြန်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု သူက မှတ်ချက်ပေးသည်။
“ဒီလိုကျဆင်းလာနေတဲ့ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးဖို့ ခိုင်ခိုင်မာမာကတိပြုအကောင်အထည်ဖော်ပေးကြပါလို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးကို FEM ကနေ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်” ဟု သူက မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် အင်တာနက်လွတ်လပ်မှု ဟူသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကဏ္ဍကို Freedom House နှင့် မိတ်ဖက်ပြုကာ FEM မှ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရမှတ်အဆင့် ၁၀၀ အနက် အဆင့် ၃၆ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ယခု ၂၀၂၀ခုနှစ်တွင် အဆင့် ၁၀၀ အနက် အဆင့်၃၁ သို့ အဆင့်ပေါင်း ၅ ဆင့် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ရမှတ် ၀ မှ ၃၉ အထိအား အင်တာနက်ပေါ်တွင် “မလွတ်လပ်ပါ” ဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် အာရှတွင် အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတွင် အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကျဆင်းမှုများအနက် အလှမ်းအကျယ်အဆုံးဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကုန်လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင် အဓိကကျသော နယ်ပယ်နှစ်ခု၌ နိမ့်ဆင်းယုတ်လျော့မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ ယင်းတို့မှာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှု နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များပိတ်ဆို့ခြင်း တို့ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအစီရင်ခံစာမှ ဖော်ပြသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် အင်တာနက်လွတ်လပ်မှုအစီရင်ခံစာကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ပါ။
Myanmar internet freedom worst decline in World
FEM calls for political parties to commit to reform as global report names Myanmar as worst in World for declining internet freedom.
“This global report is based onayear’s research into many countries and finds Myanmar has had World’s worst decline in internet freedom over the past year,” said FEM Director, Yin Yadanar Thein.
“The internet shutdown, slow 2G, website blocking, and prosecution of peaceful digital rights protesters together make Myanmar one of the world’s most repressive digital environments,” she added.
“This decline in internet freedom is not because Myanmar isanew democracy; Myanmar is actually getting worse every year, and the decline is accelerating. Internet freedom is now significantly worse in Myanmar than our neighbours Thailand, Malaysia, Cambodia, Bangladesh, Indonesia, India, and the Philippines,” she noted.
“We urge all political parties to commit to quickly reversing this trend, and restoring internet freedom in our country,” she requested.
The Myanmar section of the report, Freedom of the Net: 2020, is written by FEM in partnership with Freedom House.
Myanmar declined5points from 36 out of 100 (2019) to 31 out of 100 (2020). A score of0to 39 is classed as “not free” internet. China has the lowest score in Asia. Myanmar had the largest decline.
The report shows that Myanmar has had two major areas of decline over the past year compared to other countries: the internet shutdown and website blocking.
Read Freedom of the Net: 2020